5 Best Winter Destinations In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Winter Destinations In Eoropa
(Last Nohavaozina: 29/02/2020)
Eoropa manana sasany hatsarany ririnina mangatsiaka nandritra ny volana izay tsy toy ny misy toerana eto an-tany. Misy isan-karazany be dia be, ary tsy misy toerana roa mitovy fihetseham-po sy ny rivo-piainana. Raha ny tena izy, Maro ny olona milaza fa tanàna sy tanàn-dehibe, nandritra ny volana mangatsiaka te lavitra ny toerana vaovao. Winter manana ny mahafinaritra afaka hanova Eoropa tanteraka, ka ampifanarakarahina, mamorona zava-nitranga vaovao tanteraka ny mpitsidika fa tsy afaka ny hiaina na oviana na fotoana hafa isan-taona. Oram-panala fandavoana mitondra miaraka aminy be dia be ny asa sy ny ririnina fety manan-danja izay mahatonga ny zava-drehetra tena fety. Na dia eo aza ny haben'ny fanovana sy ny hatsaran-tarehy, dia azo atao ny mitsidika ny zava-drehetra. Raha tianao mba handeha ny sasany malaza indrindra Travel toerana, hitsidika ireo 5 toerana ririnina any Eoropa.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Vonjeo A Train saran-dalana mora indrindra Website eto amin'izao tontolo izao.
1. Winter Destinations In Eoropa: Budapest, Hongria
Raha mitady ny ririnina Hafakely izay velively mampitolagaga anao, dia mijery intsony noho Budapest. Izany no tanàna tonga lafatra ho ririnina getaway. Iray amin'ireo antony lehibe fa maro no mifidy Budapest dia takatry ny tahan'ny. Mahazo miaina ny tanàna mahafinaritra ho takatry ny tahan'ny. Budapest matetika feno mpizaha tany nandritra ny vanin-taona mafana. Na izany aza, nandritra ny ririnina, mahazo hizaha ny tanàna kely dia kely tsara tarehy amin'ny vahoaka. Ankoatr'izay, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
Ny tombony fanampiny no manaitra Margaret Island. Izany no toerana tonga lafatra ny fitsidihana raha te-manana ady snowball Epic. Be dia be ny mponina sy ny mpizahatany miara-mamory ny namany, ary mankafy ny oram-panala. Raha snowball ady tsy ho anao, dia tia Skating eo anoloan'ny lapan'ny mpanjaka! Budapest City Lasa ny ranomandry Park Skating rink mandritra ny ririnina. Rehefa mahavita nilalao teny an-oram-panala, dia afaka mifindra amin'ny ho any amin'ny fandroana. Ny mahavariana Gellert Spa dia toerana lehibe hamindroana, ka mankafy ny sasany rano mafana.
Venice Mety tsy ho ny zavatra voalohany ho avy ao an-tsaina rehefa ririnina Eoropa sary an-tsaina. Na izany aza, raha mandeha any an-tanàna ny lakandrano mandritra ny ririnina, dia hahatsiaro azy mandrakizay. Ny Feno tabataba eny an-dalambe sy ny trano fisotroana kafe no toned teo, ary mahita ny lafiny tao an-tanàna fa ny vanin-taona mafana tsy afaka maneho. Ny hustle sy feno olona misomebiseby ny vanin-taona mafana dia soloina amin'ny tony sy tony tanteraka rivo-piainana ho an'ny ririnina nitsangantsangana. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa an-tanàna avy amin'ny fiainana tena haingana rehefa Venice Carnival fitehirizan-taratasy manodidina. rehetra Febroary, ny tanàna mahazo ny firongatry ny mpitsidika, ary voaravaka hanafotra saron-tava eny an-dalamben'i ny tanàna. Famoronana akanjo sy mpandihy eny an-dalambe amin'ny tanàna maro loko hitondra ny tantara ho amin'ny fiainana. Raha te mavitrika ririnina fa tsy hanadino, Venice ataovy eo amin'ny lisitra.
Genoa ho any Venice Lamasinina
Turin ho any Venice Lamasinina
Parma ho any Venice Lamasinina
La Spezia ho any Venice Lamasinina
3. Winter Destinations In Eoropa: Paris, Frantsa
Frantsa ampifandraisin'ny ny ankamaroan'ny olona amin'ny nahandro matsiro sy ny tantaram-pitiavana tongotra. Na izany aza, ny firenena vao mainka lasa mahafatifaty, rehefa ririnina fitehirizan-taratasy manodidina, indrindra fa ao an-drenivohitra. Paris dia mahatalanjona na inona na inona fotoana taona no mandeha any. Indrisy, tsy firy ny olona mahazo ny hiaina izany mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka kokoa. Paris, ny tanàna ny fitiavana sy ny olon-tiany, Azo antoka fa faly sy volana anao raha tsy mampaninona palitao akanjo mafana sy ny fitafiana ririnina. Ny vanim-potoana fety Paris mitondra ho amin'ny fiainana. Mpitsidika ihany no tsy afaka mahazo ny po ao sakafo matsiro ary divay fety. Na izany aza, dia ihany koa ny tonga lafatra fotoana ny mahita zava-mitranga toy ny Mahagaga ny fetibe ao amin'ny Musée de Arts Fairground ary ny Lights Festival tao amin'ny Jardin des Plantes.
Hitety ny tanàna sy ny tsena voaravaka arabe, raha raisinareo ao amin'ny hatsaran-tarehy tao an-tanàna. Winter no fotoana tsara indrindra mba haka mandeha teny an-seines banky na very any an-dalamben'i Le Marais. Rehefa hitanao fa, dia afaka miseho ho Paris izay ahitana fitambaran fisotroana kafe sy mankafy ny zava-pisotro tsara. Rehefa izay atao, dia afaka mahita ny tena manintona ao Paris amin'ny andalana vitsivitsy kokoa.
4. Vienna, Aotrisy
Na dia mpizaha tany an'arivony maro mirohotra ho any Aotrisy-taona rehetra manodidina, misy manokana Fairytale mihevitra nandritra ny ririnina. Ny tanàna rehetra sy ny tanàna ao amin'ny firenena manana mihevitra ny hilaza izay tena miavaka. Tsy misy lehibe matetika orampanala tamin'ny Novambra hatramin'ny Martsa. Midika izany fa tia ny oram-panala Azo antoka fa mankafy Aotrisiana ririnina. Raha te-hiaina ny fototry ny Aotrisy ririnina, fitsidihana Vienna. Renivohitra lehibe io no nalaza noho ny toe-tsaina sy ny toetra fety fitafiana. Raha amin'ny toe-po nandritra ny ririnina fiantsenana, ho azo antoka mba hitsidika ny Noely tsena. Vienna manana ny sasany amin'ireo tsena malaza indrindra ao amin'ny rehetra ny Eoropa. Mpitsidika mahazo mankafy Aotrisy nahandro matsiro sy misotro divay ny sasany mulled. Ankoatr'izay, misy zavatra isan-karazany sy matsiro tanana sôkôla treats.
5. Winter Destinations In Eoropa: Interlaken, Soisa
Raha toa ianao ka olona ny zavatra izay tsy afaka mandany fotoana sary an-tsaina ao an-tanàna noho ny ririnina fety, avy eo Interlaken any Soisa no ririnina toerana ho anao. Tsy toy ny malaza, tanàn-dehibe toerana, Interlaken dia fialan-tsasatra tanàna akaikin'ny Alpes. An'arivony ireo mpanao ski ary snowboarders manao ny fomba rehetra Interlaken ririnina, ary ho fampiasana ny mampino ny faritra tontolon'ny tolotra. Interlaken manana ny tsara indrindra roa tontolo. Voalohany, akaiky, ary mety ny fidirana amin'ny asa an-tendrombohitra mahavariana. Faharoa, dia manolotra ny zava-drehetra misy afaka te raha ny foto-drafitrasa. Na mahazo hazavana mahafinaritra, na te ho fizahan-toetra ny fetra amin'ny tafahoatra lalana, Interlaken ho anareo. Na inona na inona ny hevitra ny mahafinaritra dia, dia ho faly ny mahafantatra fa afaka manao ny lalana miverina any tanàna sy mankafy ny sasany fondue.
Eoropa manana zavatra ho an'ny olona rehetra. Tsy Miankina aminao hanapa-kevitra izay ny ririnina Hafakely sy ny tarehiny tahaka ny fampiasana Save A Train mba ahatongavana any. Misy be dia be ny traikefa eo amin'ny ririnina volana, so get adventurous and take a bold step forward.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Winter Destinations In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dmg – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
europetravel trainjourney fiaran-dalamby soso-kevitra travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations wintertravel